people Nepal » नेपालमा युरो-४ स्ट्याण्डर्डको तेल, पहिलेकोभन्दा के फरक ? नेपालमा युरो-४ स्ट्याण्डर्डको तेल, पहिलेकोभन्दा के फरक ? – people Nepal
नेपालमा युरो-४ स्ट्याण्डर्डको तेल, पहिलेकोभन्दा के फरक ?
१९ चैत, काठमाडौं । नेपालमा औपचारिक रूपमै युरो-४ स्ट्यान्डर्ड डिजेल-पेट्रोलको बिक्री सुरु भएको छ । भारतले आफ्नो देशमा आजैबाट पूर्णरुपमा युरो-फोरको तेल बिक्री सुरु गर्दैछ । त्यसैकारण एक महिनाभन्दा अघिदेखि नेपालमा पनि अनौपचारिक रूपमा यूरो मापदण्डको तेल आउँदै थियो ।
के फरक छ यो तेलमा